amadolo Ukwelashwa yenziwa kuye ngohlobo yokulimala isiguli, noma isifo ekhona.
Lapho ushintsho elibukhali isiqondiso engxenyeni engenhla ukunyakaza komzimba ngesikhathi lapho unyawo kusekelwa, isibonelo, ukuwa ngesikhathi ezemidlalo umdlalo, isici okufana zingase zephule umsipha njengoba cruciate. I ukulimala efanayo kungaba umphumela buhlungu ngqo umbala noma kwedolo. Izimpawu umonakalo yilezi: isici wokuqhuma lokujabulela ubuhlungu, ukunyakaza neziyaluyalu, nokuvuvukala kwendawo yokulimala. Ngokuvamile lokho kulimala abasubathi yizikhukhula. Nokho, ukulimala wedatha epheleleko kungathatha indawo imvelo yasekhaya ngaso ukuwa abavamile. ukuphathwa amadolo ezimweni ezinjalo kwenziwa surgically. Ukubuyisela umsipha cruciate senziwa usebenzisa indlela endoscopic usebenzisa nesineke izicubu milisa.
Lapho ezijulile ukugoba amadolo abukhali (ezimfushane) kanye umzimba ayibhekayo, okukhona kuyo esitobhini ngokuqinile fixed (unyathela amabhuleki ku emthambekeni skiers) ngokuvamile kwenzeka meniscus edabukile. Ngakho kukhona sebuhlungwini obunzima, ivinjiwe motor umsebenzi joint, futhi kukhona ukuvuvukala. Amadolo Ukwelashwa ahlangene ukulimala onjena ukususa ingxenye idabukile we meniscus noma yokutakula usebenzisa ekhethekile sutures.
Nambili angu konke ukulimala akhawunti patella luxation. Ngokuvamile, lezi ukulimala zenzeka lapho kukhishwa umdanso ukunyakaza, imisebenzi kwezemidlalo yokuncintisana, kanye ukuwa ezimbi ekuphileni kwansuku zonke.
ekwelapheni joint amadolo kuvame ukulimala ezinjalo kungenziwa ngokuzimela. It is eyenziwe kabusha lesi sitsha.
Ukuze izifo of kwedolo zihlanganisa isifo sokuqaqamba kwamalunga deforming uhlamvu, kanye zokugula we synovium. Kuye ukuthi sigaba sini lesi sifo, uchwepheshe banganikeza izindlela ezimbili ukuxazulula inkinga: yezokwelapha futhi kuhlinzwa.
Uma amalunga omzimba wakho abakwazi ukusebenza ngokujwayelekile, kuyobe itsatfwe metal. Ukukhetha indlela ngochwepheshe kumelwe ukwabela Inkambo yokwelashwa esekelwe nesigaba lesi sifo futhi izici ngamunye nesineke. Ngemva okwengeziwe ukufunda futhi ukuxazulula le nkinga sendlela yokuphatha abanye emalungeni amadolo esimweni esithile. Inkambo yokwelapha ingase ihlanganise ukusetshenziswa amaphilisi ezinhlungu kanye ukuvuvukala. Khona-ke abakhululiwe eziyinhloko kwezidakamizwa kuhlobene iqembu pyrazolone ( "rumalon", "feprazone") futhi "aspirin". Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi ukusetshenziswa kwedatha imithi kunomthelela omubi isimiso sokugaya ukudla bungene.
Ngempela imithi oyinikiwe kufanele zifakwe desensitizing izidakamizwa "Suprastin", "Diphenhydramine" futhi "pipolfen". Ezigabeni zokuqala zesifo Kunconywa ukujova imithi ngomjovo ngqo kwedolo. hondroprotektory Esimisiwe noma ama-ejenti hormone ukusiza ekuvuseleleni izindawo isakhiwo ngokuhlanganyela kanye awuvikele ekubhujisweni. Uma isifo samathambo esasesisibi ngendlela efanele usaqala kungenzeka ukuthi yokwelashwa ingatholakala Physiotherapy kanye ukulibopha nokusebenzisa kungagcini nezidakamizwa absorbable.
Uma ukwelapha isifo ngokuhlanganyela akuyona kwenziwe, izinqubo sokugembula kungabangela imiphumela emibi kakhulu, kuhlanganise ukukhubazeka. Okwamanje, omunye abaholi bezwe emkhakheni amathambo kuyinto eJalimane. zokwelashwa kule ndawo kukhona abaningi kwemitholampilo okuholela ezweni. Ukwelashwa amalunga e-Germany ikhiqizwa sitholakele isifo ngaphambi Inkambo yokwelashwa kwezifo ezihlukahlukene.
Numb isandla: izimbangela kanye nokwelashwa ezifanele
Ukuxilongwa umehluko ubuhlungu besisu. Besisu syndrome - kuyini?
Smolov Fodor - ezithembisa Umgadli bakwazi ukuveza imizwa yabo phezu Euro 2018 eFrance
Uyithola kanjani i-passport nge-Internet
Ungasindisa kanjani amakhethini akho owathandayo